११७ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेछ एउटै बल्ब ! – Etajakhabar
बिजुलीको एउटा बल्बले सामान्यतया कति वर्षसम्म काम गर्ला ? बल्ब कम्पनीले दुई–तीन वर्षको वारेन्टी दिन्छन् । तर, एउटै बल्ब ११७ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको छ भन्ने सुन्दा जोसुकैलाई अचम्म लाग्ला । हो, क्यालिफोर्नियाको लिभरमोर सहरमा एउटा बल्ब ११७ वर्षदेखि बलिरहेको छ । त्यहाँको एक दमकल केन्द्रमा सन् १९०१ मा उक्त बल्ब जडान गरिएको थियो । अहिलेसम्म सो बल्ब बलिरहेको छ । चार वाट बिजुलीबाट चल्ने बल्बको फ्युज यति लामो समयसम्म गएको छैन । जबकि बल्ब चौबिसै घण्टा बलिरहन्छ
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ०१, २०७४ समय: १२:३४:३५
ट्रम्पले किम जोङ उनलाई खुलापत्र लेखेर रद्ध गरे सिंगापुरको शिखरवार्ता, भीडन्ततिर अमेरिका र उत्तर कोरिया
भारतीय क्रिकेटका कप्तान विराट कोहलीले नरेन्द्र मोदीलाई यस्तो च्यालेञ्ज दिएपछि मच्चियो हंगामा
अज्ञात व्यक्तिले बम हानेर क्याफेमा खाना खाइरहेका चार व्यक्तिको हत्या, कैयौँ घाइते